Mahadum Ionic conductive cellulose akwadebewo site na mahadum wuhan ma nwee ike ịrụ ọrụ na ihu igwe dị n'okpuru adịghị efu - Zhejiang Leinuo Textile Technology Co., Ltd.
Mahadum Ionic conductive cellulose akwadebewo site na mahadum wuhan ma nwee ike ịrụ ọrụ na ihu igwe dị n'okpuru adịghị efu
Dika ihe eji eme ihe ato ato otutu mmiri, hydrogel nwere akparamagwa nke ịgbado ọkụ, nghọta na biocompatibility. Ejirila ya n'ọtụtụ ebe na lenses kọntaktị, ntecha, injinị anụ ahụ, Uwe uwe na ubi ndị ọzọ. N'afọ adịbeghị anya, E jirila hydrogels rụọ ọrụ n'ọhịa nke ihe mmetụta na ngwaọrụ eletrọnik na-agbanwe agbanwe. Otú ọ dị, hydrogels a na-emekarị na-efunyụọ ihe ndị mbụ dị na ha n'ihi kefriza na obere okpomọkụ, na-egbochi ngwa ha na obere okpomọkụ.
Wang Yang, lv ang na zhang lina, onye nkuzi mahadum wuhan, akwadebewo ihe mmeri cellulose hydrolyze ionic nke ọma, nke enwere ike iji ya, mkpakọ na mmetụta okpomọkụ. N'adịghị ka hydrogels ọdịnala, Ngwongwo ha na - eme ka ikuku ghara iguzo ha eme ka ha gha aru oru nke oma. A na-ebipụta nsonaazụ ndị ahụ n'akwụkwọ akụkọ ACS Appured Materials & Oghere.
Isi ihe maka mgbochi na oru eletrik nke cellulose hydrogels dabere na benzyl trimethyl ammonium hydroxide, ihe ngbochita ogwu nke ndu bu otu n’ime usoro ihe omumu cellulosic ohuru nke ndi otu a mebere, ihe omumu a kwuru. Mgbe agwagbu kemịkal nke cellulose, a naghị asachapụ ntọala sitere na ihe mgbaze dịka usoro nkwadebe ọdịnala, kama echekwabara ya. Ngwongwo ya dika electrolyte na-enye cellulose hydrogel ogwugwo na akwara oru ndi ozo.
Nrụ ọrụ nke hydluels cellulose ọdịnala na ikuku sel cellulose na-egbochi obere okpomọkụ
Ndị nyocha na - 24 Obere okpomoku ga-ebelata mgbochi nguzogide hydrogel nke edobere na nkwonkwo aka aka, ma ọ bụrụ na otu mkpisi aka mkpịsị aka na ngwa ngwa ma ọ bụ na -adị nwayọ na mgbatị dị iche, nguzogide nke gel gel di omimi nwere ike gbanwee ya na mmeghari mkpịsị aka na-egosi ngbanwe nke mgbanwe kwekọrọ, na ọ fọrọ nke nta na-apụghị ịmata ụda ma ọ bụ hysteresis, hydrogel na enweghi ntụpọ na-adịgide adịgide n'ihi ịgbatị, gosiputara na gel gelive conductive nwere ihe eji aru oru ogugu nke di ala - mmegide na arụmọrụ nzaghachi chọrọ nlezianya.
A na-eji hydrogels antifreeze mee ka ihe mkpịsị aka iji mee ka mkpịsị aka mkpịsị aka dị ala
Ọ bụghị naanị nke ahụ, ndị ọrụ nyocha ahụ ga - emekwa ka elektrik kwuo okwu n'ime hydrogen nke na - eduzi "nzaghachi okpukpu abụọ" mmetụta, nwere ikike na nrụgide na-akpata nrụgide - merie min na arụmọrụ ihe mmetụta abụọ, Nnwale ndị ọzọ nyochara gosipụtara na nzaghachi abụọ ahụ anaghị egbochi onwe ha, gosiri na ihe nchoputa dabere na antifreeze conductive hydrogel nwere nkwụsi ike na-ahụ maka ikuku, nwee ngwa ngwa ma nwee ntụkwasị obi, arụmọrụ siri ike ma rụgharịa ọrụ ma dabara adaba maka njiri mara obere okpomọkụ site na iji ọnọdụ okpomọkụ ka enwere ike iji ya na gburugburu ebe dị mgbagwoju anya nke ngwaọrụ ọgụgụ isi mmadụ..
Usoro nnwale na usoro ọkụ ọkụ nke anakpo ihe mmetụ ọkụ hydrogelze
Isiokwu tesis: Ntughari, Antifreezing, Ionic Conductive Cellulose Hydrogel na Sitena Sensitivity na Okpomoku Subzero
Thesis njikọ: http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsami.9b15849
Nyochaa ụzọ mmepe isii nke teknụzụ akụrụngwa na-esi na ITMA 2019
Arụ ọrụ cellulose na-achọghị ọgwụ